Madaxweyne Gadaafi oo diyaar u ah in uu xilka isaga dego, maxayse tahay shuruudu (Warbixin+Video+Sawiro) – SBC
Madaxweyne Gadaafi oo diyaar u ah in uu xilka isaga dego, maxayse tahay shuruudu (Warbixin+Video+Sawiro)
Madaxweynaha wadanka rabshaduhu ka aloosan yihiin ee Liibiya Col. Mucamar Al-Qadaafi ayaa la shaaciyey in uu diyaar u yahay in uu xukunka isaga dego isla markaana la soo afmeero dirirta colaadeed ee ka aloosan dalkiisa, waase hadii la qaato oo laga aqbalo shuruudo uu ku dhegan yahay.
Wargeys lagu magacaabo Kommersant kana soo baxa magaalada Mosco ee caasimada wadanka Ruushka ayaa qorey in Col. Qadaafi uu diyaar u yahay in uu xukunka ka dego hadii la siiyo damaanad qaad buuxa oo la xiriira amaankiisa & in wiillkiisa loo ogolaado in uu isu soo taagi karo doorashooyinka madaxtinimo oo wadankaasi lagu qabto.
Wargeyska oo aan shaaca ka qaadin ilaha warkan uu ka soo xigtey ayaa qorey in Qadaafi uu ku jiro wadaxaajood arinkan ku aadan, taasi oo ah in la soo gabagabeeyo xukunkiisa 42-da sano isla markaana uu si nabad ah ku joogo wadankiisa.
Gaddafi ayaa rajo ka qaba in uu dhamaado kacdoonka hubaysan ee ka dhanka ah ee soconaya mudada shanta bilood ah, waxaana uu qabaa in qoyskiisu ay si nabad ah ku joogaan dalkooda, wiilkiisa Saif Al-Islam-na uu ku yeesho galaangal awooda maamulka dalka gaar ahaan in uu isku soo sharixi karo doorashooyin dhaca mustaqbalka.
Shuruudahan uu soo jeediyey Col. Gadaafi waxaa la rumaysan yahay inaanay aqbali doonin kooxaha mucaaradka ku ah ee golaha qaranka KMG Liibiya NTC ee fadhigoodu yahay magaalada Benghazi.
Todobaadkii ina waydaartey Saif wuxuu u jeediyey xulufada NATO caga jugleyn dheeraad ah isagoo sheegay in wadamadaasi ay iska xalaaleysteen weeraro.
Maxkaamda dambiyada dagaalka ee The International Criminal Court (ICC) waxay iyana soo saartey qaraaro lagu soo qabanayo Gadaafi & wiilkiisa, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ku kaceen wax lagu tilmamay dambiyo ka dhan ah aadamtinimada oo ay ka mid yihiin qaarijiin & tacadi.
Afhayeenka Col. Gaddafi Moussa Ibrahim wararkaasi ka soo yeeray ICC wuxuu ku macneeyey kuwa aan sal iyo raad toona laheyn, wuxuuna sheegay in Col. Qadaafi aanu wax wada hadal ah arimahan ka galeyn oo uu u dhiman doono difaaca dalkiisa.
Musa wuxuu sheegay in dawlada Liibiya ay wadahal la leedahay hogaamiyeyaasha kooxda mucaaradka gaar ahaan kuwa ku sugan Talyaaniga & Norway, isagoo sheegay in wadaxaajoodyadu ay ku siman yihiin oo kaliya xabad joojin, gargaarka aadamtinimo & in wadahadal u furmo dadka Liibiya dhexdooda.
Sarkaal sare oo ka tirsan dawlada Liibiya ayaa isaguna geestiisa ka shanqariyey in waxoogaa horumar ah laga sameeyey wadahadalada u dhaxeeya dawlada & kooxaha mucaaradka si loo afmeero xiisadaha colaadeed ee dhaafay afarta bilood, waxaase hadalkaasi ganafka ku qaaday hogaamiyaha kooxda mucaaradka oo carabaabay inaanay jirin wax wadaxaajood ah oo xiligan socda.
Mustafa Abdel Jalil oo ah hogaamiyaha golaha qaranka ee KMG ayaa sheegay inanay jirin wax wadahadal ah oo ku saleysan dhameynta colaada sokeeye ee ka aloosan Liibiya.
Abdul-Jalil waxaa kaloo oo uu iska fogeeyey hadalo hore oo isaga laga soo xigtey oo ahaan in Col. Gadaafi ay dhici karto in loo ogalaado in uu dalka sii joogo taasi oo qayb ka ah heshiis qaybo ah oo ah in uu xukunka ka dego uuna ku dhawaaqo xabad joojin.
“Liibiyiintu ma doonayaan Gadaafi in uu sii joogo hadii hadii uu dhinto, taasi oo ka dhalatey waxa uu ku kacay mudadii uu xukunka hayey iyo intii lagu jirey kacdoonka ka dhanka ah” ayuu yiri Mr Abdul-Jalil said yesterday.
Gaashaanbuurta Nato waxay wadey laga soo bilaabo bishii March ee sanadkan duqeymo ka dhan ah military-ga Qadaafi si araxda looga jabiyo awoodiisa ciidan, shaley oo ugu dambeysay diyaaradaha Nato waxay duqeymo la dhaceen goobo ku yaal caasimada Tripoli, waxaana la soo sheegayaa diyaarado dagaal oo magaalada dul heehaabaya.
Inkastoo taasi jirto hadana sarkaal ka tirsan taliska ciidamada Liibiya wuxuu sheegay in duqeymaha xaga cirka ay ka waabiyeen ciidamadooda inay si caadi ah u hawlgalaan, wuxuu sheegay inay ay adeegsanayaan gawaari dagaal oo la mid ah kuwa mucaaradka taasi oo qayb ka ah xeeladaha dagaal ee ciidamada Col. Gadaafi si ay uga baxsadaan duqeymaha diyaaradaha NATO.
Halkan ka daawo Video-dagaalka Liibiya & xasuuqa shacabka